Hevitra mikasika an'i Voahangy - Tononkira Malagasy - serasera.org
Hevitra mikasika an'i Voahangy
Momba an'i Voahangy | Hametraka hevitra
12. Nampiditra : orthon
Anisan'ny Mpihira mahafinaritra ahy iz io, de tena miencourager az aho nohon'ny zava-bitany. Anisan'ny hitiavako az iany ko de le hirany arrangen'ny Sonn ren zan mba tena Akafiziko e
11. Nampiditra : jeanlucarsene
firy taona moa izao i Voahangy amin'izao fotoana izao?
10. Nampiditra : Belle
Miarahaba antsika rehetra mpankafy an'i Voahangy.
Vao haingana aho no nanoratra tamin'i Voahangy ka mifandray tsy tapaka izahay hatramin'izao. Ny azoko lazaina dia ny fahatsorany, tsy araka ny mampalaza azy. Ka marina daholo ny voalazanareo rehetra ireo hoe, raha toa azy daholo ny toe-tsain'ny mpikanto fanta-daza dia hahafinaritra. Maro amin'ireo "artista" mantsy no miavonavona ka raha tsy misy ilAny ny mpankafy azy, dia tena manainga orona tokoa izy. Ny mpankafy anefa no tena herin'izy ireny mampiseho ny lazany!
Mirary soa ho antsika rehetra, indrindra ho an'i Voahangy. Na dia efa zokiny amin'ny zava-kanto aza izy dia tsy mihanona amin'ny efa vitany fa mikatsaka hanatsara izany sy hanaraka ny toetr'andro foana.
Misaotra Voahangy nanome anay ny hiranao izay tambavy manampy amin'ny fiainana tokoa.
Manoroka mamy e!
9. Nampiditra : miou
mba finaritra aho raha toa azy daholo ny artista
ny hirany tsirairay, tena samy manana ny mampiavaka azy
8. Nampiditra : miou
7. Nampiditra : ikalaholy
Ka matoa misy ny kanto tsara avoakanay dia noho ny fitiavanareo anay!
Tiako ny mampahafantra anareo mpankafy an'i Voahangy fa taorianan'ny hira "tora bato miverina" dia efa miala any indray ny hira vaovao "NY ANY AMINAY"
ny votoatin'ny hira vaovao izany dia noforonina indrindra ho an'ireo malagasy rehetra miaina lavitra an'i madagasikara - embona sy hanina ny tany niaviana.
Mbola alefako ato na ny tonony - indrindra moa fa ilay hira !
Dia mankafiza an'i Voahangy hatrany Tompoko!
Mirary soa ho anareo rehetra.
Indro apetrako eto ny ad. mail ko ho an'izay te hifandray, satria i Voahangy dia olon'ny fifandraisana : voahangy_serasera@yahoo.fr
6. Nampiditra : ikalaholy
Voahangy mpihira malagasy ihany ity!
Misaotra ireo rehetra mankasitraka ny ezaka ataonay mpanakanto aho! Tiako ny mampahafantatra anareo fa matoa izahay miezaka dia noho ianareo ka
5. Nampiditra : pissoa
Izaho tena mankafy Voahangy. Tena tiako ny tonon'ny hirany, indrindray ilay mampiseho ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina ireny. Tena tsy latsa-danja koa ny feony. Ny feon'i Voahangy mihitsy fa tsy ny feon-kira fotsiny.
Ankafiziko manokana ihany koa Voahangy + Raindimby.
Dia mirary soa hatrany ho an'i Voahangy.
4. Nampiditra : dokantsah
Slt an!!!! k'aiza daholo e za zao tanora tokoa nefa mankafy voahangy ,tsy votery ny lehibe ihany no mankafy azy fa ny rehetra
3. Nampiditra : istraky
Inoako fa efa voarain'i bozimanga ilay hiran'i voahangy torabato miverina izaho mihitsy no nandefa azy
2. Nampiditra : bozimanga
izaho mba mitady ilay dikan- kiran' ny voahangy hoe tora- bato miverina izay mba afaka manome ahy dia misaotra mialoha eh (hiran'i clo mahajanga io)
1. Nampiditra : rafilozofy
I Voahangy dia mpanakanto mpihira isan'ny andrarezina eto Madagasikara. Be mpankafy tokoa izy indrindra ireo olona efa zokinjokiny. Satria manaraka ny toetr'andro sy ny zava-misy ny tononkirany. Matetika izy no mihira ny fiaimpiainany manokana. Ary betsaka ny manakanto miara-miasa aminy. Dia mirary soa ho an'i VOAHANGY sy ny Kantony.